Geeddi-Socodka Hannaanka Somaaliland,Xaggee Hayaanku Foolka Ku Hayaa? Qalinkii Xassan Cumar Hoorri | HAYAAN NEWS
Geeddi-Socodka Hannaanka Somaaliland,Xaggee Hayaanku Foolka Ku Hayaa? Qalinkii Xassan Cumar Hoorri
December 2, 2017 - Written by Mustafe Jannaale
Qoddobka kale oo ilaa hadda mugdiga kaga jira kuwa moodaya in ay aqoon dheeraad ah u leeyahiin Somaaliland waxaa uu yahay dalku inuu ku soo caano maalay xeerar hoose iyo dhaqan adag oo muwaadin kasta ku sanduleeya inuu u hoggaansamo danta qarankan iskoriska ah taaso NABADDU gundhig ay u tahay. Shacabku yar iyo weyn waxaa uu ka wantoobay wax kastoo u horseedi kara jab. Sidaa awgeed, adduunku, mar kale, marag ha ka ahaado hayaanka sii socda ee Somaaliland ku tiigsanayso in ay xubin xurmo leh ka dhex noqoto bahweynta caalamka.